War deg deg ah:Labada Shariif oo khilaaf hor leh uu ka dhex aloosmay ka dib markii…. – SBC
War deg deg ah:Labada Shariif oo khilaaf hor leh uu ka dhex aloosmay ka dib markii….
Khilaaf hor leh oo aan qarsoodi laheyn ayaa mar kale ka dhexqarxay Madaxweynaha & Gudoomiyaha baarlamanka ka dib markii maanta la isku dayey in la magacaabo Ra’isalwasaaraha cusub ee xukuumada KMG Soomaaliya.
Warar SBC ay ka heshay ilo wargal ah ayaa sheegaya in Madaxweyne Sheekh Shariif uu go’aansadey in uu magacaabo Ra’isalwasaaraha C/wali Maxamed Cali (Gaaz) oo haatan ah sii hayaha xilka Ra’isalwasaaraha arintaasi oo la sheegay in markii hore ay isla ogolaadeen Labada Shariif.
Saaka markii la isagu yimid xarunta madaxtooyada oo loo yeeray saxaafada, xildhibaano & marti sharaf kale ayaa waxaa shir gaar ah qol isku xirtey Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka iyagoo mudo saacado ah oo ay kulan lahaayeen uu shirka banaanka uga soo baxay Gudoomiyaha Baarlamanka oo aad u careysan, isla markaana gabi ahaanba isaga baxay xarunta madaxtooyada.
Wararka waxay intaasi ku darayaan in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ka booday ka dib markii uu saaka arkay Cabdiwali Gaaz & Farmaajo oo aad isula qoslaya isla markaana goobta la doonayey in Ra’isalwasaaraha lagu magacaabo so wada galay iyagoo isla socda.
Ilo wareedku waxay sheegayaan in Gudoomiyaha Baarlamanka uu dalbadey in Ra’isalwasaaraha laga dhigo C/risaaq Jurille taasi oo oo uu ku gacan sayrey Madaxweynaha, waxaa kaloo la soo sheegayaa in qaar ka mid ah wasiirada uu soo gudbiyey Shariif Xasan qaarkood uu ka biyo diiday Sheekh Shariif kuwaasi oo ay ka mid yihiin C/shakuur C/raxmaan, Cumar Islow & Axmed Jaamac Jangali.
Lama oga xaaladu halka ay ku dameyn doonto, iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta & xildhibaanadu aad ula yaaban yihiin hab dhaqanka Gudoomiyaha baarlamanka oo ay ku tilmaameen nin dacalka ku dhegan hawl kasta, iyadoo la ogyahay sida uu qabo axadiga Dawlada KMG in madaxweynuhu uu leeyahay awooda soo magacaabista Ra’isalwasaraha, taasi oo ah mid aanu wax shaqo ah ku laheyn Gudoomiyaha baarlamanka, iyadoo baarlamanku ay u leeyihiin xaq inay diidaan ama ansixiyaan Ra’isalwasaaraha la soo magacaabo.
Warar dheeraad ah oo arinkan ku aadan kala soco SBC